अनलाइनबाट गरिने बैंकिङ कारोबारमा राष्ट्र बैंकको कडाइ ! यी हुन् पछिल्ला ११ नियम ! (नियमको विवरणसहित)
ARCHIVE, BANKING, OFF THE BEAT » अनलाइनबाट गरिने बैंकिङ कारोबारमा राष्ट्र बैंकको कडाइ ! यी हुन् पछिल्ला ११ नियम ! (नियमको विवरणसहित)
काठमाडौँ- अनलाइनबाट गरिने बैंकिङ कारोबारमा राष्ट्र बैंकको कडाइ गरेको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो नियममा क्रेडिट कार्ड प्रयोग गर्दा, विद्युतीय प्रणाली प्रिपेड कार्डबाट गरिने कारोबार लगायतका सम्बन्धित कुराहरुमा नयाँ नियम आएको छ । हेर्नुहोस् नेपाल राष्ट्र बैंकले पछिल्लो समय ल्याएका नियमहरु :